TRUESTORY: November 2013
တစ်ပါးရှိတယ်။သူ့မှာ သူကိုယ်တိုင် မွေး ထားတဲ့ ကြောင်လေးတစ်ကောင်လည်း ရှိတယ်။အဲဒီဘုန်းတော်ကြီးဟာ သူ့ကြောင်ကို သူ့ဘ၀နဲ့အမျှချစ်ခင်တယ်။ဒါကြောင့် ကျောင်း
ထဲက သမထ ဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်လို့
သင်တန်းပေးလေ့ကျင့်တဲ့အခါ သူ့ကြောင် ကို ဘေးမှာ အမြဲတမ်းထားထားတယ်။
ဒါဟာ သူ့တပည့်ကျောင်းသားတွေအတွက် ဖြစ်
ယင်းလူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ၏ profile ပုံအား ထူးကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးတေဇ၏ ဓာတ်
Posted by TRUE STORY at 4:58 PM No comments:
သမ္မတဦးသိန်းစိန် ပြည်သူလူထုသို့ (၄၃) ကြိမ်မြောက် မိန့်ခွန်းအား ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတုခန်းမ၌ ယနေ့ပြောကြားမည်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် စိန်ရတုခန်းမ၌ ယနေ့(နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်) ပြုလုပ် မည့် "တည်ငြိမ်အေးချမ်း သည့် နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးတွင် လူထု အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍ"
ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ထိုသို့ ပြည် သူလူထုသို့ မိန့်ခွန်းပြောကြားမှုသည် (၄၃) ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများအတွင်း အစိုးရနှင့်
နိုဝင်ဘာလအတွက် ဖီဖာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် မြန်မာအသင်း အဆင့် ၉ ဆင့်တက်လာ
ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ ဖီဖာအဖွဲ့ဝင်ဘောလုံးအသင်းများ၏ လတ်တလောရလဒ်များအပေါ်အခြေခံ၍ လစဉ်ထုတ်ပြန်လျက်ရှိသော ဖီဖာကမ္ဘာ့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင်အသင်းသည် ယခင်လ ကထက် အဆင့် ၉ ဆင့်တက်လာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၄၀ အဖြစ်ရပ်တည် လာနိုင်ခဲ့သည်။ အာရှဒေသတွင် အီရန်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ သြစတြေးလျ၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်တို့က ထိပ်တန်း ၅ နိုင်ငံအဖြစ် ဦးဆောင် လျက်ရှိ ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံက အာရှအဆင့် ၂၂ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Posted by TRUE STORY at 10:28 AM No comments:
ဧရာဝတီတိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံလေ့လာရေးကော်မတီက ဖွဲ့စည်းပုံပါ အချက်ကိုးချက်ကို ပြင်ဆင်ရန် ဆုံးဖြတ် ထားသော်လည်း သမ္မတအရည်အချင်း ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်ရန် အချက်
Posted by TRUE STORY at 10:22 AM No comments:
လေကြောင်း ကာကွယ်ရေး ဇုန်သစ်အတွင်း စစ်လေယာဉ်များ တရုတ်စေလွှတ်
ပေကျင်း နိုဝင်ဘာ ၂၉
တရုတ်နိုင်ငံသည် လွန်ခဲ့သော သီတင်း ပတ် အတွင်းက ၎င်း တို့၏ လေကြောင်း ကာကွယ်ရေး ဇုန် သစ်အဖြစ် ထုတ်ြ ပန် ကြေညာခဲ့ သည့် အရှေ့တရုတ် ပင်လယ် အတွင်းရှိ ကျွန်းများသို့ စစ်လေယာဉ်များ
Posted by TRUE STORY at 10:07 AM No comments:
စောင့်လေ မျိုးနွယ် ဆိုတဲ့ တရားနဲ့ မညီခဲ့လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အနေနဲ့
"ဒေါ်စု သမ္မတဖြစ်သွားရင် တိုင်းပြည် ဖယိုဖရဲ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်၊ ၅၉ စ ကိုလည်း ပြင်စရာမလိုဘူး" ~ ဦးဝီရသူ
"ဒေါ်စု သမ္မတဖြစ်သွားရင် တိုင်းပြည်
ဖယိုဖရဲ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်၊ ၅၉ စ ကို
လည်း ပြင်စရာမလိုဘူး" ~
မန္တလေးမြို့ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်မှ ဦးဝီရသူ
သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး
Posted by TRUE STORY at 9:45 AM No comments:
မော်လမြိုင် လေဆိပ်တွင် Cessna Grand Caravan Ex လေယာဉ်ဆင်း/တက်မှု ပြုလုပ်
မော်လမြိုင် နိုဝင်ဘာ ၂၉
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့တွင် နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၄၃ မိနစ်ခန့်က အမေရိ ကန်နိုင်ငံလုပ် Cessna Grand Caravan Ex အမျိုးအစား၊လေယာဉ်အမှတ် XY-AJL အင်ဂျင် တစ်လုံး တပ် ၁၈ ဦးစီး လေယာဉ်ဖြင့် မြန် မာ့လေကြောင်း မှ လေယာဉ်မှူးများ ဖြစ် သည့် ဦးဇော်ဟိန်း၊ ဦးဇော်မျိုးဦး၊ ဦးမင်းဝေတို့ သုံးဦး လိုက်ပါ လျက် မော် လ မြိုင် လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ လေယာဉ်သည် မော်လမြိုင်လေဆိပ်တွင် လေယာဉ်မှူးများ လိုက်ပါပြီး ကွင်းအခြေအနေ အပေါ် အဆင်း/အတက် (၇)ကြိမ် အစမ်း လေ့ကျင့် ပျံသန်းခဲ့ပြီး ညနေ ၃ နာရီ ၄၈ မိနစ်ခန့်တွင် ရန်
Posted by TRUE STORY at 9:33 AM No comments:
Posted by TRUE STORY at 8:16 PM No comments:
ဦးသိန်းစိန်၏ ခေါင်းဆောင်မှု အတတ်ပညာ နှင့် ဒေါ်စု၏ အတတ်ပညာ
(သည်စာက ရှည်ပေမဲ့ အဆုံးထိ
********************************* ကျတော်တို့နိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ဘူး ပါတယ်....တကယ်တော် တကယ်ကိုယ်ကျိုး စွန့်ခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေမှာတူညီတဲ့ အချက်တွေရှိပါတယ်......ကျတော်သိထားတဲ့ ဥပမာလေး တခု နဲ့ချိန်ထိုးပြီးပြောချင်ပါတယ်။
[လူတစ်စုဟာ ပေါက်တူး ဂေါ်ပြား တူရွင်းတွေနဲ့ မြောင်းတူးဖို့တစ်နေရာကိုရောက်လာပါတယ်....
Posted by TRUE STORY at 7:57 PM No comments:
မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြစ်သော မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ် (Mobile Banking)ကို ပြည်တွင်းဘဏ်အချို့က စမ်းသပ်သုံးစွဲလျက်ရှိရာ အောင်မြင်စွာသုံးစွဲနိုင်ခဲ့သည်ဟု စမ်းသပ်ခဲ့သည့်ဘဏ်များဖြစ်သော CB ဘဏ်၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာနှင့် AGD ဘဏ်၏ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာတို့၏ ပြောကြားချက် များ အရ သိရသည်။အဆိုပါစနစ်ကို ပြည်တွင်းတွင် သမ၀ါယမဘဏ် (CB )နှင့် အာရှ စိမ်းလန်းမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(AGD)တို့က စမ်းသပ် သုံးစွဲရာတွင် အောင်မြင်မှုရသည်ဟု ၎င်းတို့က မဇ္ဈိမ ကိုပြော ခင်းဖြစ်သည်။ သမ၀ါယမဘဏ်၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးဖေမြင့်က “ကျွန်တော်တို့ ဘဏ်ဝန်
Posted by TRUE STORY at 5:31 PM No comments:
ထူးကုမ္ပဏီမှ ၎င်းအားတရားစွဲဆိုရန် သက်သေများနှင့် အချက်အလက်များစုဆောင်းလျက်ရှိပြီး၊
Posted by TRUE STORY at 4:47 PM No comments:
ATM နှင့် ငွေလဲကောင်တာ ပါ မိုဘိုင်းကားများ ဆီးဂိမ်း အားကစားကွင်းများ တွင် လှည့်လည် သွားလာမည်
Sea Game ကာလ အားကစားကွင်း များ တွင် ငွေလဲ ငွေထုတ်အဆင်ပြေစေရန်ATM
နှင့် ငွေလဲကောင် တာ ပါရှိမည့် ကား ( ၃ )စီးကို စတင်ပြင်ဆင်ထားပြီဟု CB ဘဏ် ရုံးချုပ်မှ သိရသည်။
အဆိုပါ ကားများမှာ ဆီးဂိမ်းအားကစားပွဲများ စတင်ကျင်းပချိန်မှ ပြီးဆုံးချိန် အထိ အားကစား ကွင်းများတွင် လှည့်လည် သွားလာနေ မည်ဖြစ် ပြီး ATM စက်ပါ ကားနှစ်စီး နှင့် ငွေလဲကောင် တာ သီးသန့်ပါ ကားတစ်စီး စုစုပေါင်း( ၃ )စီး
Posted by TRUE STORY at 4:42 PM No comments:
ဒေါ်စုကို ဘာလို့ မုန်းတာလဲ?
၁။ ဒေါ်စု ကအမျိုးမစောင့်ဘူး
အဲရစ်နဲ့လက်ထက်ဖို့ ကိစ္စ မှာ ဘယ်သူ မှတားဆီးမ
ရအောင် ငြင်းဆန်ပြီး ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့
၂။ မောက်မာတယ် (အတွင်းစိတ်ကောက်တယ်)
မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ သူတို့ ရဲ့အားနွဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို
သူတို့ တတ်တဲ့ပညာ အရည်အချင်းတွေ လုပ်ဆောက်နိုင်စွမ်းတွေနဲ့
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ယာဉ်မရပ်ရ လမ်းမကြီးများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော လမ်းများတွင်စည်းကမ်းမဲ့စွာရပ်နားနေသည့်
မော်တော်ယာဉ်များကို ကရိန်းယာဉ်များဖြင့် ဖယ်ရှားအရေးယူရာတွင်ထိရောက်စွာ
ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဖမ်းဆီးရေး အဖွဲ့ များ ကို တိုးမြှင့်အရေးယူ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင် ခင်က နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက် နံနက်ပိုင်း တွင် ပြော
Posted by TRUE STORY at 4:14 PM No comments:
မကြာသေးမီက တရုတ်အစိုးရကသတ် မှတ်ပြ ဋ္ဌာန်း လိုက်သော အရှေ့တရုတ် ပင်လယ်အ တွင်း ရှိလေကြောင်းကာကွယ်ရေးဇုန် အတွင်း အမေရိကန်စစ်တပ်မှဘီ-၅၂ ဗုံးကြဲလေယာဉ်နှစ် စင်းဖြတ်ကျော်ပျံသန်းခဲ့ကြောင်း အမေရိကန် အစိုးရတာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားပြီးစီအင်န်အင်န်သတင်း တွင်ဖော်ပြ သည်။ အဆိုပါ အမေရိကန်လေတပ်မှ ဘီ-၅၂
နေ့ ခင်းကြောင်တောင်ကြီးမှာ စပါးကြီးမြွေ ရဲ့ မျိုခြင်းကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ လူကတော့ အရက်သမား တစ်ဦးဖြစ်ပြီးမူးပြီး လမ်းဘေးမှာ လဲနေတဲ့အချိန်မှာ မျိုသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယရဲ့ Attapadi ဧရိယာ Kerala ဒေသ မှာ ဖြစ် ပါတယ်။
သင်ခန်းစာကတော့ အိန္ဒိယရဲ့လမ်းဘေးမှာ အရက်မူးပြီးလျှောက်မသွားပါနဲ့လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by TRUE STORY at 4:02 PM No comments:
Ballon Over Bagan အမည်ဖြင့် ပုဂံတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပြီးမန္တလေးမြို့၌ပျံသန်း မည့်ခရီးလမ်းကြောင်းရှာဖွေခဲ့ပြီး ယခုနှစ်ရာသီ အတွက် ယခုလ ၂၁ ရက်မှစတင်၍ ခရီးသည် များ အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း
လာမည့်နှစ်ပတ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံ
တကာမှ ဧည့်သည်သောင်းနှင့်ချီ၍ လာရန်ရှိ
သည်။ အာဆီယံဆယ်နိုင်ငံမှ အားကစားအဖွဲ့
များ၊ သတင်းထောက်များ၊ ပရိသတ်များဖြစ်
သည်။ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဧည့်သည်သောင်းနှင့်
ချီ လာရောက်မှုမှာ ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း
အကြောင်းမှာ ယခင်ကျင်းပခဲ့သော ကျွန်းဆွယ်ပြိုင်ပွဲများတွင် အားကစား နည်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်သော နိုင်ငံနည်း၍ ထိုအကြိမ်များထက် ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်းက နိုင်ငံတကာဧည့်သည် ပိုများမည်ဖြစ်သည်။ ထိုဧည့်သည်တော်များနှင့် ဆီးဂိမ်း
Posted by TRUE STORY at 3:57 PM No comments:
ယခုဆိုလျှင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးအသွင်သို. ကူးပြောင်း လာခဲ. သည်မှာ ၂နှစ်ခွဲကျော် (အစိုးရ/လွှတ်တော် သက်တမ်းတစ်ဝက်ကျော်)သို. ရောက်ရှိခဲ.ပြီ ဖြစ်သည် ။ ကုန်လွန်ခဲ.သောကာလကိုပြန်ပြောင်းကြည်.လျှင် ပြည်သူလူထုအားလုံးဒီမိုကရေစီစနစ် အကြောင်း
Posted by TRUE STORY at 3:50 PM No comments:
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုပဲပြန်လည်ရွေးချယ်တင်မြှောက်စေလိုပါတယ်။တကယ်လိ်ု့ဦးသိန်းစိန်အနား ယူတော့ မယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိလွှတ်တော်ဥက္ကဠ ဦးသူရရွှေမန်းကိုပဲဦးဇင်းက အားပေးသွားမှာပါ"
Posted by TRUE STORY at 3:35 PM No comments:
Posted by TRUE STORY at 3:31 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထင်ကရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦးဖြစ် သူဦးတေဇအနေဖြင့်၂၀၁၅ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကံအကြောင်း လှပါက၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်အလားအလာရှိကြောင်းဦးတေ
ဇနှင့်နီးစပ်သည့်ယခင်စစစမှ အမည်မဖော်လိုသူ အရာ ရှိဟောင်း တစ်ဦးကပြောကြားလိုက်သည်။
“သူ့ အနေနဲ့ က စီးပွားရေးထဲမှာပဲ နစ်မြုပ်နေတာကြာပြီ။ ဆယ် သက်စားမကုန်အောင်လည်းရှာပြီးပြီ၊ ခင်ဗျားတို့ မီဒီ ယာတွေ အခေါ်အဝေါ် ခရိုနီပေါ့ဗျာ၊ နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်၊
Posted by TRUE STORY at 3:26 PM No comments:
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံအသီးသီးတွင် အမည်ပျက် စာရင်းဝင်ထားသည့် နိုင်ငံခြားသား များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ကျင်းပ မည့် ဆီးဂိမ်းပွဲတော်ကို ဝင်ရောက် လာမှု မရှိစေရန်အတွက် လေဆိပ် နှင့် နယ်စပ်ဂိတ်များတွင် အထူး လုံခြုံရေး များ ထားရှိကာ စောင့်ကြပ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းပြောကြားချက်ကို နိုဝင် ဘာ ၂၅ရက်က နေပြည်တော် MICC ၌ပြုလုပ်သည့် မြန်မာ နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အား ဆူဇူကီးကား ကုမ္ပဏီ
Posted by TRUE STORY at 3:20 PM No comments:
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးသည် နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်အရေးကြီးပြီး အမျိုးသားဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ တစ်ခုတည်းသာမက တရားဝင်ပါတီအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သောကြောင့် အားလုံး ပါဝင်ေ ဆွး နွေးရမည့်ကိစ္စဟု ယုံကြည်ကြောင်း သမ္မတ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် တို့နှင့်တွေ့ဆုံရန် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြ ည်၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အပေါ် ၎င်းတို့နှစ်ဦးက တုံ့ပြန် လိုက်ကြောင်း သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ် က ပြောကြားသည်။
“ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကိစ္စဟာ နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် အရေးကြီးကိစ္စဖြစ်သလို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သာမက တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော နိုင်ငံရေးပါတီ ၅၈ ခုလုံးနဲ့
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများကို တစ်သမတ်တည်း သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည်။ မည်သည့်မြို့၊ မည်သည့်လမ်း၊ မည်သည့်နေရာတွင် မည်ကဲ့သို့မောင်းနှင်ရမည်ဟူ၍ သီးခြား သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပေ။ ကွဲပြားချက်ဆို၍ လမ်းအခြေအနေပေါ်မူတည်ကာ မည်သည့်နေ ရာတွင် အရှိန်လျှော့မောင်းနှင်ရမည်၊ မည်သည့်နေရာတွင် ပုံမှန်မောင်းနှင်နိုင်မည်
Posted by TRUE STORY at 11:45 AM No comments:
မျိုးစောင့်ဥပဒေကို ဒေါ်စုအပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ခဲ့သော်လည်း လိင်တူခြင်းပေါင်းသင်းမှုကို သဘောတူထောက်ခံ
မြန်မာ နိုင်ငံတွင် လိင်တူချစ်ခြင်းကို ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ် မှတ်ထားခြင်းအားပယ်ဖျက်ပေးရန်ပထမဆုံးအကြိမ်
မြန်မာ LGBT အခွင့်အရေးဆိုင် ရာကွန်ရ က် ကထောက် ခံ သည့် ကြေညာ ချက်တစ်စောင်ကိုထုတ် ပြန်လိုက်ကြောင်း သိ ရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၉ရက်တွင်ပြု လုပ်သော HIV/AIDS နှင့်ပတ် သက် သည့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအာ ရှပစိဖိ တ်ဒေသ ဆိုင်ရာ ညီ လာခံ သို့ပေးပို့သော လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်၏မိန့်ခွန်းတွင်ယင်းကဲ့သို့ထ ည့်သွင်းပြော ကြား ခဲ့ခြင်းကို မြန်မာ LGBT ခွင့်အရေး ဆိုင်ရာကွန်ရက်မှ နို ဝင်ဘာ ၂၂ရက်တွင် ထုတ်ပြန် လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ
Posted by TRUE STORY at 11:14 AM No comments:
အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ပျံ့နှံ့ လျက်ရှိသည့် အသံဖိုင်သည် ၁၉၉၃ ခုနှစ်က နိုင်ငံတော် ကာ ကွယ်ရေး တက္ကသိုလ်အရာရှိကြီးများ အုပ်ချုပ်မှု မွမ်းမံသင်တန်း ၃/၉၃ ကဟောပြောပို့ ချ ချက်များ ဖြစ်ပြီး သင်တန်းပို့ ချချက်များဖြစ်သဖြင့် မာကျော၊ ကြမ်းတမ်း၊ မသိမ်မွေ့ခြင်းများ ပါရှိနေခဲ့ပြီး အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအား ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ရှိနေ သည့်အပေါ် ထိခိုက်နစ်နာစေရန် တမင် ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတော်၏ လမ်းစဉ် အား အစိုးရကိုယ်စား ရှင်းလင်း ခဲ့ခြင်း ဖြစ် သဖြင့် ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား နားလည်ခွင့်လွှတ် ပေးစေလိုကြောင်းကို ကရ၀ိက်ဟို တယ်၌ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်း၊ နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးခင်ညွန် နှင့် လျှပ်တပြက်ဂျာနယ် အယ်ဒီ တာ ချုပ် ဦးမြတ်ခိုင်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အင်တာဗျူးများအား စုပေါင်းပုံနှိပ် ထုတ်ဝေသည့်
Posted by TRUE STORY at 11:06 AM No comments:
အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည့် ကျပ် ၂၀၀၀၀ တန် ဂျီအက်စ်အမ် ဆင်းမ်ကတ် များ စတင်ရောင်းချပြီ
အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည့် ကျပ် ၂ဝဝဝဝတန် ဂျီအက်စ်အမ်ဆင်းမ် ကတ်များ စတင်ရောင်းချပြီဖြစ်ကြောင်း မြန် မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှသိ ရသည်။
အဆိုပါဆင်းမ်ကတ်များ အား ဆီးဂိမ်းပွဲတော် တွင် နိုင်ငံတ ကာမှ လာရောက်ကြ မည့်ဧည့် သည် များနှင့် ပြည်ပမှလာရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် အားကစားသမား၊ နည်းပြ၊ အုပ်ချုပ်သူများအသုံးပြု နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ရောင်း ချပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်၍ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ သက်တမ်းသုံးလသာအသုံးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း
‘အာဒံရယ်၊ ဧဝရယ်၊ ဒသရယ်’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ အကယ်ဒမီဆုရရှိပြီး ရုပ်ရှင်လောကမှာ မှတ်တိုင်စိုက်ထူခဲ့ သူလည်းဖြစ်သူ အကယ်ဒမီသက်မွန်မြင့်က ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်ဆန်း မှာ ချစ်သူကိုစစ်နိုင်နဲ့အတူ မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲတော့မှာဖြစ် ပါတယ်။ သတို့သမီးက
Posted by TRUE STORY at 9:05 PM No comments:
Posted by TRUE STORY at 7:05 PM No comments:
ကန်ဒေါ်လာ သန်းတစ်ရာခန့် ရင်းနှီးပြီး ပြည်တွင်း၌ PEPSI အချိုရည် ထုတ်လုပ်မည်
PEPSI အချိုရည်ကို ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရန် ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်သည်ဟု MGS Beverage Co;Ltd ဥက်္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းထွန်းက နိုဝင်ဘာ ၂၁ တွင် မဇ္ဈိမ ကို ပြောသည်။
အချိုရည်ကို ကိုရီးယားအခြေစိုက် Lotte ကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ကိုဖရန်ချိုက်စ်စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ် မည် ဖြစ်သည်။ကုမ္ပဏီနှစ်ခုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ နီးပါးရှိမည်ဟု ခန့်မှန်း ထားသည်။ပုလင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ပုလင်းပြန်သိမ်းသည့်စနစ်ဖြစ်၍ စရိတ်စက သက်သာ မည်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဟုဆိုသည်။နိုင်ငံခြားမှ တင်သွင်းခြင်း
Posted by TRUE STORY at 7:03 PM No comments:
အင်တာနက်သတင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု သည့် အနုပညာရှင်များသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အခွင့်အရေး များ ဆုံးရှုံးရလျက်ရှိကြောင်း ဟယ် ရီပေါ် တာမင်းသား ဒန်နီရယ်လ်ရတ်ကလေ့ခ်ျက ဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အနုပညာ ရှင်များ အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်ဘဝကို လိုချင်ပါ က တွစ်တာ သို့မဟုတ် ဖေ့ဘွတ်ခ် ဝက်ဘ်ဆိုက် အစ ရှိ သည့် လူမှုကွန်ရက်များတွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များအား ဖော်ပြခြင်း ကို ရှောင်ရှား သင့်ကြောင်း ဒန်နီရယ်လ်က သတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။
Posted by TRUE STORY at 7:00 PM No comments:
Posted by TRUE STORY at 6:58 PM No comments:
သူရိယနေ၀န်းမှ ဦးမိုးဟိန်းအား ဦးတေဇ တန်ပြန်စိန်ခေါ်ပြီး ထွက်မပြေးရန် သတိပေးပြီ
ယနေ့ထုတ် သူရိယနေဝန်း အပတ်စဉ် ဂျာနယ် မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါးအဖွင့်မှာ ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် မိုးဟိန်း က မိမိနာမည်တပ်ပြီး စိန်ခေါ်မှုလုပ်ခဲ့တာကို ဖတ်မိပြီး မိမိအံ့သြ မိပါတယ်။ အံ့သြမိတယ် ဆိုတဲ့အချက်မှာ မီဒီယာ လုပ်နေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ သားတစ်ယောက်
Posted by TRUE STORY at 6:46 PM No comments:
ကမ္ဘာဖလားအတွက် မိန်းမလိင်အင်္ဂါနှင့် တူသော ဘောလုံးကွင်းကြီး ကာတာ တည်ဆောက်
ကွင်းကြီး၏ ဒီဇိုင်းပုံစံကို စတင်
၍ ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ရာ အမျိုး
သမီး တစ်ဦး၏ လိင်အင်္ဂါနှင့်
Posted by TRUE STORY at 6:40 PM No comments:
Posted by TRUE STORY at 4:37 PM No comments:
အရောင်းအဝယ် နည်းပါးလာခြင်းနှင့် အတူ
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်း
ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အပြောင်းအလဲ
များ ပြုလုပ်မည်ဟူသော သတင်းများကြောင့်
ဂျပန် လေလံဈေးကွက်အတွင်း အင်ဂျင်ပါဝါ
၁၃၀၀ စီစီအောက် မော်တော်ယာဉ်များ
ကျပ် ၁၀ သိန်းခန့် (ယန်း တစ်သိန်းခန့်)
ဈေးကျ သွားကြောင်း လေလံဈေးကွက်
အတွင်းမှ သိရသည်။နိုဝင်ဘာလ လယ်မှ စ၍ ဈေးနှုန်း ကျဆင်းလာခြင်း ဖြစ်ပြီး လေ လံဆွဲသူ နည်းပါးလာခြင်းကြောင့် ဈေးဆက် လက် ကျဆင်းနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ မော်တော်
Posted by TRUE STORY at 4:27 PM No comments:
ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ လုပ်ငန်း
လိုင်စင် ထုတ်ပေးရေး နှောင့်နှေးနေ
မှုကြောင့် ပြည်တွင်း ဆက်သွ ယ်ရေး
ထက် နောက်ကျ၍ ၂၀၁၄ ခုနှစ် တတိ ယ သုံးလပတ် (နှစ်ကုန် ပိုင်း)မှသာ စ တင်နိုင် ဖွယ် ရှိကြောင်း နော်ဝေ အခြေစိုက် တယ်လီနော၏ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် Mr.Jon Fredrik Basksaas ကို ကိုးကား၍ ရိုက်တာ သတင်း
Posted by TRUE STORY at 4:23 PM No comments:
မြန်မာလူငယ်တစ်ဦး စင်္ကာပူအွန်လိုင်းမီဒီယာတို့ စွပ်စွဲခံရ
Stomp လို့အမည်ရတဲ့ စင်္ကာပူမှာ ဆိုရှယ် သတင်းမီဒီယာ ဝဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေ တဲ့ သတင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ စင်္ကာပူ စစ်မှု ထမ်း ( NS ) လူငယ် တစ်ယောက် MRT ရထားပေါ် မှာ ရေသောက် နေတာကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပြီး Stomp ပေါ်မှာတင် လိုက် တာကြောင့် ၂ ရက်အတွင်း ကြည့်ရှုသူ ၁သိန်း ၂သောင်း ကျော် ခဲ့ ပါတယ်။
စင်္ကာပူက MRT ရထားပေါ်မှာ အစေား အသောက်စားခြင်း၊ အအေး၊ အဖျော်ယာ မကာ၊ ရေ သောက်ခြင်း လုံးဝ ခွင့်မပြုထား ပါဘူး။ ဒီအတွက် လည်း စည်းကမ်းထိန်း သိမ်းရေးတို့ကတွေ့ရင် ဖမ်းဆီး အရေးယူးပါ တ
Posted by TRUE STORY at 4:19 PM No comments:
Posted by TRUE STORY at 3:19 PM No comments:
ပျဉ်းမနား နိုဝင်ဘာ ၂၂နေပြည်တော်
ကောင်စီနယ်မြေ ပျဉ်းမနားမြို့ ရန်အောင် အမှတ် (၂)ရပ်ကွက်မီးရ
ထား ဝင်းနေ ဦးတင်ဦး (ခ) ဦးဖြူးကျော် အ သက် ၅၁ နှစ် သည်
အရှေ့တောင် အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ
အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် ထမ်းဆောင်ခွင့် ရရှိခြင်းအား တစ်ကိုယ်တော် လမ်းလျှောက် ဂုဏ်ပြု
မော်လမြိုင် နိုဝင် ဘာ ၂၂,၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် အာဆီ ယံဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန် ယူ ဆောင် ရွက် ခွင့် ရရှိသည်ကို
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ကြီးနှင့် နိုင်ငံတော် အကြီး အကဲများ အားဂုဏ်ပြု
Posted by TRUE STORY at 3:07 PM No comments:
နိုင်ငံခြားသား စက်ဘီးစီး အဖွဲ့ ၁၄ ဦး မော်လမြိုင်သို့ ရောက်ရှိ
မော်လမြိုင်မြို့၌ ယမန်နေ့ ညနေ ၃ နာရီခွဲကပြင်သစ်နိုင် ငံသား Mr.Thaffarzateh ပါ အမျိုးသား ကိုးဦး၊ အ မျိုးသမီး လေးဦး၊ ကနေဒါ နိုင်ငံသူ တစ် ဦး စုစုပေါင်း
အမေရိကန်သမ္မတအိမ်ဖြူတော်အမျိုးသား လုံခြုံရေး အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Susan Rice.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်နေချိန်မှာပဲ တကယ့်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ့် လုပ်ငန်းတရပ်ကတော့ ရှိနေတုန်းပဲလို့ အမေရိကန် သမ္မတအိမ်ဖြူတော် အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် Susan Rice က ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလည်း ဘယ်လို ကျော်လွှားမလဲဆို
Posted by TRUE STORY at 12:41 PM No comments:
ဒီကနေ့ မီဒီယာလောကကို ပဲ ကြည့် ကြည့်၊သတင်းဂျာနယ်တွေ ပဲကြည့်ကြည့် ယုတ်ဆွအ ဆုံး အရပ် ဘက်စကားဝိုင်းတွေကို ပဲကြည့်ကြည့် နိုင်ငံရေးနဲ့ အခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး၊ လက်ရှိ အစိုးရကို ဖျက်သိမ်း ပြီး နောက် မင်းလောင်းမျှော်တဲ့ အကြောင်း အရာတွေပဲ အများ ဆုံးတွေ့မြင် လာရတော့ အတွေးတစ်ခုဝင်လာပါ တယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာဘာလဲပေါ့.....။ သေချာတာကတော့ နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတော်နဲ့ အစိုးရအပိုင်းကို ထည့်
Posted by TRUE STORY at 11:01 AM No comments:
ရန်ကုန်။ ။ တက္ကသိုလ်များကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါက လက်ရှိ တက္ကသိုလ်အရေအ တွက် လျော့နည်းသွားနိုင်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီး (ခေတ္တ)ဒေါက်တာမျိုးမြင့်ကပြောကြား လိုက် သည်။
တက္ကသိုလ်များကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးပါကဝန်ကြီးဌာနလက် အောက်တွင်ရှိနေ လိုသော တက္ကသိုလ်များ ရှိလာနိုင်သလို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် ခွင့်နှင့်နေလိုသော တက္ကသိုလ်များ ပေါ်ထွက် လာနိုင်ကြောင်း၊ တက္ကသိုလ် အချင်းချင်း ပူးပေါင်းလာနိုင်ခြင်းများလည်း ရှိလာနိုင်ပြီး အရည်
Posted by TRUE STORY at 10:45 AM No comments:
ကျောင်းနားမှာ ဆေးလိပ် ဆေး
ရွက်ကြီး ကင်းစင် နယ်မြေ ဆိုတာ လူကြီးပြောင်းသွားလို့ ဆောင် ပုဒ်ပါ တစ်ခါတည်း သူ့နောက်ပါသွားလေ ရာ့သလား မ ပြောတတ်ပါဘူး။
ဒီအထဲက တစ်ပုံကို အိတ်ပိတ်ပြီး အဲ့ဒီကျောင်းကအတန်း ခေါင်းေ
ဆာင် ဆရာလက်ထဲလည်း ထည့်ပြီးပါပြီ။ အ ထောက်အထား ယူပေးတဲ့ ကိုယ့်ကို တောင် ပြန် ရန်လုပ်ချင် တဲ့ပုံပဲ ပြောပုံက ဒီပုံ ဘယ်သူရိုက်တာလဲတဲ့။
ကျောင်းနား က ဆိုင်တွေက တော့ ဆေးလိပ်ကို
ကျောင်းသား ကျောင်းသူ တွေ
အ ကြွေအမ်း တာတောင် ငါးဆယ် မရှိလို့ ဆေးလိပ်ယူသွားတဲ့ဗျာ
Posted by TRUE STORY at 10:43 AM No comments:
စိတ်မော လူမော စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်း ခြင်းကြုံရတတ်၏။ ရည်ရွယ်ချက်များ လျှင်မြန်စွာ အောင်မြင် လိုသော်လည်း နှောင့်နှေး ထစ်ငေါ့ မှု့တွေရင်ဆိုင်ရတတ်၏။ ယုံကြည်အားကိုးရမည် ထင်ရသူတို့ ကလည်း စိတ်တိုင်းမကျ မှု့များ ဖြစ်ပေါ်မည်။ ဒီကြားထဲ အတိုက်အခံ တွေ ပေါ်အုံးမယ်။ အားငယ်ရမလို ဖြစ်သော်ငြား မနည်းအားတင်းနေရတတ်၏။ ဖြေဆိုမှု့များ အောင်မြင်မည်။ ရာထူးအလုပ်များ ရာထူးတက် လစာတိုးမည်။ မရည်ရွယ်သော ခရီးများ သွားရမည်။ ချစ်သူ နှင့် အဆင်မပြေမှု့များ ကြုံမည်။ ချစ်သူ သစ္စာဖောက်၍ အခြား
Posted by TRUE STORY at 10:34 AM No comments:
ဒီနေ့ထွက်တဲ့ Myanmar Times ဂျာနယ်မှာ တပ်ကသိမ်းခဲ့တဲ့ မြေတွေအနက်က စီမံကိန်းမလုပ်သည့် နေ ရာများတွင် လုပ်ငန်းပြန် လည်လုပ်ကိုင်လိုကြဆိုပြီး သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဆောင်း ပါးခေါင်း စဉ်ကိုဖတ်လိုက်ခြင်းမှာပဲ အတော်ကိုအံ့သြ
သွားတယ်။ ဘာလို့လ ဆိုတော့ အဲဒီဆောင်း ပါး ထဲမှာပါတဲ့ တပ်က ကျွန်တော်တို့ရွာနဲ့ ရွာချင်း ကပ်လျက်ဖြစ်နေတာကိုး။ အံ့သြရတာ က ဖြစ် သမျှအကြောင်းတွေကို အူမချေးခါးမကျန် သိနေတဲ့သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ တအံ့တ သြဖြစ် သွားရတာပါ။
အမှန်ကတော့ ၂၀၀၁ က တပ်မတော် သုတေသနဌာနအတွက်သိမ်းဆည်းခဲ့တဲ
့မြေတွေ ဟာမြေလွတ်မြေရိုင်း ဖုန်း ဆိုးမြေတွေ
Posted by TRUE STORY at 10:26 AM No comments:
ဂျပန်ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန တာဝန် ရှိသူများသည် အစိုးရ၏
Posted by TRUE STORY at 10:23 AM No comments:
လွှတ်တော်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခု သီးသန့်ဖွဲ့စည်းရန် တောင်းဆိုမှုကို အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ကာချုပ် သဘောမတူ
လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပုံ တိုးချဲ့ရာတွင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်နှစ် ရပ်ပေါင်းအတွက် ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေး တပ် ဖွဲ့တစ်ခု သီးသန့်ဖွဲ့စည်း၍ ယင်း တပ်ဖွဲ့တွင် တပ်မတော်အရာရှိ ၄၀ ဦး ပါဝင်အားဖြည့် ရန် တောင်းဆိုထားခြင်းကို အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တို့က သဘောမတူကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌထံ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ထားကြောင်း သ
Posted by TRUE STORY at 7:23 PM No comments:
ဦးသိန်းညွှန့် ၏ ၁၉၈၂-ခုနှစ် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ဥပဒေအပေါ် သုံးသပ်ပြောကြားချက်
“၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ဥပဒေအား (၅) နှစ် အချိန်ယူ ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့်
တိုင်းရင်း သားများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရေရှည်တည်
တန့်နိုင်ရေးအတွက် ရေးဆွဲထားခဲ့သည့် “အလွန်အရေးကြီးသည့်ဥပဒေတစ်ရပ်”
“ခေတ်နှင့်အညီ အရေးယူ အပြစ်ပေးမှု များ ပြင်ဆင်ရန်မှတစ်ပါး” အခြားမရှိပေ….။
“၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေသည် ပြည်ထောင်စု
လွှတ်တော်မှ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း မပြုသမျှ တည်ရှိနေသော တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။ ယခုချိန်ထိ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေသည် တည်ဆဲဥပဒေအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က
Posted by TRUE STORY at 7:19 PM No comments:
လေးချောင်ထောက်မီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြနေတဲ့ စစ်ဗိုလ်မှ ကျောင်းသူတစ်ဦးအား မုဒိန်းကျင့်ဟုဆိုသည့် သတင်း ဖြစ်ရပ်မှန်
ကျေးဇူးပြု၍ နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာပေးပါရှင့်၊ အမေနဲ့ ပထွေးက အကြပ်ကိုင်နေတဲ့ကြားကနေ အကို ဗိုလ်ကြီး ဆီကို၊ ညီမ ယွန်းသော်တာမြတ်နိုး (အထက ၂ မရမ်းကုန်း) ရိုသေစွာ လက်အုပ်ချီလျက် စာရေး လိုက်ပါတယ်၊ ဒီစာလေးက အကို ဗိုလ်ကြီးဆီ တနည်းနည်းနဲ့ ရောက်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်
Posted by TRUE STORY at 7:17 PM No comments:
ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် တရားမဝင် ပစ္စည်းများ ယခုလ ၁ဝ ရက်အတွင်း ကာလတန်ဖိုး ကျပ် ၂၃၅ ဒသမ ၅ သိန်းခန့် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့
ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင်=အကောက်ခွန် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တင်သွင်းလာ သည့် ပစ္စည်းများကို အရေးယူ ဖမ်းဆီးမှုများ လုပ်ဆောင်လျက် ရှိနေပြီး နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၁ဝ ရက်အထိ ကာလတန်ဖိုးကျပ် ၂၃၅ ဒသမ ၅ သိန်းဖိုးခန့်ရှိသော တရားမဝင် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
''ဝင်ရောက်နိုင်မယ့် နေရာတိုင်းမှာ စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်၊ တရားဝင်
စတုဒိသာ ကျွေးမွေးပွဲများ ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲများနှင့် နိဗ္ဗာန်ဈေးများတွင် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ ပါဝင် ဆင်နွှဲလာ
မြန်မာလူမျိုး များ၏ အလှူအတန်း ပြုလုပ်သော တန်ဆောင်မုန်းလ အတွင်း ကျင်းပသည့် ကထိန်နှင့် ပတ်သက်သည့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများနှင့် စတုဒိသာ ကျွေးမွေးပွဲများတွင် နိုင်ငံခြား ခရီးသွား များ ဝင်ရောက် စားသုံးခြင်းနှင့် အလှူငွေများ ထည့်ဝင် လှူဒါန်းခြင်းများလည်း ရှိလာကြောင်း သိရသည်။ယခုအခါ ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ နေရာအနှံ့အပြားတွင် ကျင်းပသည့် စတုဒိသာ ကျွေးမွေးပွဲ များနှင့် တုံကင်ကတ်များ တန်းစီရယူ၍ နံပါတ်အလိုက် လိုက်လံကာ ပစ္စည်းနှင့် စားသောက်ဖွယ်ရာ များ ထုတ်ယူရသည့် နိဗ္ဗာန်ဈေး ပွဲတော်များကိုပါ နိုင်ငံခြား ခရီးသွားများက ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပါဝင်
Posted by TRUE STORY at 11:20 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမြင့်ဆုံးတောင်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ခါကဘိုရာဇီတောင်ဟာ လတ်တလော တိုင်းတာချက် အသစ်တွေအရ အမြင့်ဆုံးတောင်အဖြစ် ဆက်ရှိနေမလားဆိုတာ မသေချာတော့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဒုတိယအမြင့်ဆုံးတောင်လို့ သတ်မှတ် ထားတဲ့ ဂမ်လန်ရာဇီတောင်ကို ပြန်လည် တိုင်း တာ ခဲ့တဲ့ အခါ အရင်ကတိုင်းခဲ့တဲ့ အမြင့်ထက်
ဆီးဂိမ်းတွင် ရွှေတံဆိပ်ရရန် တစ်နိုင်ငံလုံးမျှော်လင့်ထားသည်ကို မိမိအနေဖြင့် သိရှိကြောင်းနှင့် ရွှေ တံ ဆိပ် မရပါက ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူသည့်အနေဖြင့် ရာထူးမှနုတ်ထွက်မည်ဟု ပတ်ဆောင်ဟွာ
“ဒီဇာတ်ကို တအားကြိုက်ခဲ့တာ။ မင်းသား ဇာတ်မှ၊ မင်းသမီး ဇာတ်မှ မဟုတ်ဘူး။ ပရိသတ် အတွက် တကယ်ကို အမြင်ဆန်း တဲ့ ဇာတ်လေး ဆိုရင်လည်း မင်းသားဇာတ် မ ဟုတ် လည်း ရိုက်မှာပါပဲ။ ရိုက်ရင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် ၂၇
ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းတွင် နိုင်ငံ
တကာ အားကစား သမားများ
အတွက် ဝန်ဆောင်မှု ၁၈ မျိုးကို
၂၄ နာရီ ဆောင်ရွက်ပေး သွားရန်
“နိုင်ငံစုံကနေ လာတဲ့ချိန်မှာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ အခက်အခဲမဖြစ်အောင် ဘာသာစုံ
Posted by TRUE STORY at 9:15 AM No comments:
ချမှတ်ခဲ့တဲ့ Resolution မှာမြန်မာနိုင်
ငံက နိုင်ငံမဲ့ (Stateless) ရိုဟင်ဂျာ
သာဖြစ်သည်) တွေကို နိုင်ငံသားဖြစ်
ခွင့်ပေးဖို့ မြန်မာအစိုးရကို တိုက်
တွန်းရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကုလ
သမဂ္ဂတတိယကော်မတီကအင်္ဂါနေ့က အားလုံးသဘောတူ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
Posted by TRUE STORY at 9:08 AM No comments: